ပရိုတိန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
↑ ၂.၀ ၂.၁ van Holde and Mathews, pp. 1002–42.
↑ Dobson CM. (2000)။ "The nature and significance of protein folding"။ in Pain RH. (ed.) (ed.)။ Mechanisms of Protein Folding။ Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press။ ISBN 0-19-963789-X။ CS1 maint: extra text: editors list (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပရိုတိန်း&oldid=723956" မှ ရယူရန်
၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။